PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - I-CHIEFS IKHOKHOBELA UMDLALI WE-DOWNS
I-CHIEFS IKHOKHOBELA UMDLALI WE-DOWNS
Umotaung ukhale ngokuxinwa yizinhlelo ZETKO
Ilanga langeSonto - 2017-11-05 - Front Page - SENZO SOKHELA
UBOBBY “Bobsteak” Motaung oyimenenja-jikelele yekaizer Chiefs kuvela ukuthi uzama ukuphinda ashaye ngesitini emuva kwendlebe imamelodi Sundowns ngokhama Billiat okuvela ukuthi wenqaba ukwelula inkontileka nale kilabhu kapatrice Motsepe.
Ubilliat odlala esiswini kwiDowns, kubikwa ukuthi uyenqaba ukwelula inkontileka yakhe namaBrazilian.
Kubikwa ukuthi unqaba nje, yingoba kunezinto angajabulile ngazo okungabalwa kuzona umholo. Kuthiwa kunabadlali azibona engcono kunabo kodwa abahola kakhulu kunaye.
Kuthiwa ukhaliswa kakhulu ngusibusiso “Villa” Vilakazi osayiniswe yidowns engukaputeni webidvest Wits okuthiwa akasondeli nakancane kuyena ngomholo.
Leli phephandaba lihletshelwe yimithombo yalo ukuthi umotaung ufuna ukuyiphinda idowns ngobilliat njengoba kuthiwa useke wabonakala kaningi naye bebambe umhlangano ofihlekile.
Phambilini ichiefs isayinise uramahlwe “Rama” Mphahlele obengukaputeni wedowns emuva kokuba lesi sitobha senqabile uku- vuselela inkontileka kumabrazilian.
Kuthiwa emhlanganweni wokugcina umotaung awubambe nobilliat ngeledlule, lo mdlali uthembise lesi sikhulu ukuthi uma ingalungi indaba yakhe yokudlala ngaphandle kwakuleli okubalwa naseEurope, noma kanjani uzosayina nechiefs.
“Into eyenza ubobby abambe imihlangano esithe nobilliat wukuthi umthetho kawumuvumeli njengoba ukubeka kucace ukuthi ungaxoxa nomdlali kuphela uma esesalelwe yizinyanga eziyisi-6 ukuba aphelelwe yinkontileka yakhe nekilabhu yakhe.
"Ngokomthetho nje ubobby angaxoxa nobilliat ngomasinga- na (January).
“Umotaung ufuna ukuyiphinda idowns njengoba ethathe umphahlele yasala incela izithupha.
"Kakusiyena yedwa ubilliat oxoxa nechiefs njengoba notebogo Langerman benothemba Zwane nabo bemanqika ukwelula izinkontileka nedowns,” kusho lo mthombo.
Leli phephandaba lishayela umotaung ngalolu daba, walile ukuphawula ngalo wathi bamatasa balungiselela umdlalo omqoka we- quarter final ye-telkom Knockout lapho bezobhekana khona nechippa United namuhla ngesonto ngo-15h30 enelson Mandela Bay Stadium, ebhayi.
“Okwamanje simatasa silungiselela lo mdlalo omkhulu, indaba yabadlali sizobuye siyibone,” kusho umotaung ezakhe ezingakaze zinqobe inkomishi kwezidlalelwa ngaphansi kwepremier Soccer League (PSL) selokhu iqashe esigqikini sokuqeqesha usteve “Mphathi” Komphela kumasizini amabili adlule.
NGUKHAMA Billiat wemamelodi Sundowns.